Kedu ihe ha bụ na ogologo oge ka ihe ahụ dị? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 June 2019	• 1 Comment
Enweela m ọtụtụ ugboro iji kwurịta usoro ndị nwere ike ịmepụta mkpụrụ edemede miri emi. Maka ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ, ga-amasị m ikwughachi ebe a na ntakịrị nkọwa zuru ezu na ngwaahịa pụrụ iche nke a raara nye isiokwu a. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-eso akụkọ ahụ kwa ụbọchị, ọ dị oké mkpa ka ị mara nke a, n'ihi na ị ga-ahụ usoro ndị dị maka nanị ịkpọ ndị mmadụ. Dị mfe.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: bnr.nl, wikipedia.org
Tags: Mmegha, ai, CGI, deepfakes, Digital, ihu, agba, GAN, Generative, ọgụgụ isi, akụrụ, etiti, ozi ọma, netwọk, neural, akụkọ, Nvidia, nhazighari, Weta
26 June 2019 na 06: 15
Ndị isi nke ụwa a ka na-eji otu usoro ahụ eme ihe. N'ihe banyere nkà na ụzụ, ha na-agbaso oge. Na n'oge gara aga, ị nwere ike ịmegharị agbụrụ nile ka ọ bụrụ ndị na-adịghị adị. Ha na-abụ otu nzọụkwụ n'ihu anyị site na ịchịkwa akụkọ ihe mere eme site n'enyemaka nke akwụkwọ na-atụgharị na ndị dị otú ahụ.
Na n'oge gara aga, e nwekwara ndị Martin bụ ndị gwara ndị mmadụ na a na-aghọgbu ha.
Ihe ọjọọ bụ na ndị mmadụ taa na-eche na ha maara karịa ndị anyị bu ụzọ. Echeghị m na ọtụtụ agbanweela, anyị ka bụ ndị ohu na-arụ ọrụ onwe ha maka ihe oriri na ihe ọṅụṅụ.
Ha na-ekwu "ị gaghị ekweta ihe niile ha kwuru"
Taa anyi na - ekwu "I kwesighi ikwere ihe nile i huru"
" Anja Schaap site na Katwijk n'emebido ụbọchị ọzọ "liri" na gburugburu mechiri emechi
Njikọ ihu igwe: ịzọrọ ndị mmadụ na akwa akwa akwa »
Nleta nile: 16.138.069
SandinG op Ihe omume nje Corona na ememme izu isii tupu ntiwapụ nke Wuhan, gosipụta ọnọdụ yiri ya
Riffian op Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi
Eke op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu